MW Joe Biden oo fadeexad wayn dhex taagan (Waxa lagu haysto iyo xaalkiisu halka uu taagan yahay?) | Hadalsame Media
Home Arrimaha Caalamka MW Joe Biden oo fadeexad wayn dhex taagan (Waxa lagu haysto iyo...
MW Joe Biden oo fadeexad wayn dhex taagan (Waxa lagu haysto iyo xaalkiisu halka uu taagan yahay?)
(Hadalsame) 24 Abriil 2022 – FADEEXAD HAREEYSAY JOE BIDEN – Joe Biden waa madaxwaynihii 47-aad ee dalka Mareeknka, taas oo uu ku guuleystey doorashadii la qabtay 20/ 1- 2021-kii. Wuxuu xilka qabtay isaga oo ay dul hagooganayso fadeexad qarsooneyd, laakiin soo if-baxdey xilligii uu tartanka ku jiray.
Fadeexaddaas ayaa waxay tahay mid uu sabab u ahaa wiil uu dhalay oo la yiraahdo Hunter Biden. Wiilkan oo da’diisu ay tahay 52 sano jir, ayaa wuxuu yahay qareen iyo ganacsade. Sanadkii 2020, ciidanka FBI-da ee dowlad-goboleedka Delaware ayaa waxay mariyeen baaritaan la xiriira lacago canshuur ah oo si khaldan ku soo maray. Hunter Biden waa wiil ku caan baxay balwadda maan-dooriyaha iyo anshax-xumida. Isagu waa ninka ka danbeeya fadeexadda aabihiis soo wajahdey oo la filayo in muddo-xileedkiisa uu la dhamaysan waayo.
5/ 12- 2013kii ayuu Joe Biden wuxuu booqdey dalka Shiinaha, isaga oo xilligaas ahaa madax-wayne ku-xigeen. Wiilkiisa Hunter ayuu horey u sii watey. Hunter Biden wuxuu socdaalkaas ku soo heley xiriir ganacsadayaal Shiino ah. Xiriirkaas wuxuu dhaliyay in nimankii Shiinaha ahaa ay Hunter u soo bandhigaan in uu xubin ka noqdo guddi ay leedahay shirkad gaas oo laga leeyahay dalka Ukrain. Waxay u ballan-qaadeen in uu ku qaadanayo mushahar dhan 50,000 oo dollar bil walba. Isna waa uu oggolaadey. Shirkadda waxaa la yiraahdaa (Burisma Holding). Waa shirkad uu leeyahay nin kamid ah ragga ugu hantida badan Ukrain oo la yiraahdo Mykola Zolchevsky.
Ujeeddada ganacsatada Shiinaha waxay ahayd in magaca wiilkan ay ku badbaadiyaan shirkaddan oo xilligaas fadeexad xooggan ay haysatay. Wax sheekadu socoto, dowladda Ukrain oo si xooggan u dooneysey in ay xubin ka noqoto is-bahaysiga Midowga Yurub ayaa shuruudaha ka hor-taagnaa waxaa kamid ahaa in ay laaluushka ka nadiifiso dalkeeda. Waxaa la gaarey xilli xeer-ilaaliyaha guud ee dalka Ukrain Victor Schukin uu u soo dhaansadey in uu daba-gal ku sameeyo shirkadda Brisma Holding.
Sida uu sheegey wargeyska New York Post, arimaha xasaasiga ah oo e-maillada laga heley waxaa kamid ah in Hunter Biden uu aabihiis ka dalbadey in uu rag kamid ah masuuliin dalka Ukrain in ay shaqada ka fariisiyaan xeer-ilaaliyaha guud ee dalka Victor Schukin. Ninkan ayaa dowladda Ukrain waxay u xil-saartey in uu daba-gal ku sameeyo shirkedda.
Sanadkii 2015-kii, Joe Biden, booqasho uu ku tegey Ukrain wuxuu madax-waynihii xilligaas (Petro Poroshenko) u sheegey, haddii uusan shaqada ka cayrin Viktor Schukin in uu maamulka Obama la wadaagayo sidii looga hakin lahaa lacag halka belyan ah oo la deyminayo Ukrain. Labadii xisbi ee Mareekanka u talinayay iyo dowladihii Yurub waa ay soo dhoweeyeen xil ka-qaadistii lagu sameeyey xeer-ilaaliyaha. Arintaasina waxay ka dambeysey dicaayad hor-dhac ahayd oo ninkaas ka faaftey.
Isaguna ma hadlin oo isma difaacin, bal waa uu la aamusey arinkii. Sheekadan ayaa waxay kamid tahay dhacdooyinka badan ee fadeexadda ku ah Joe Biden, kuwaas oo ku soo if-baxay xogo laga heley laptob uu leeyahay Hunter Biden. Sheekada fadeexadda ah waxay bilaabatay bishii abriil 2019-kii, markii Hunter Laptop uu leeyahay u geeyey dukaan lagu hagaajiyo kombyutarada oo la yiraahdo (The Mac Shop). Dabadeed muddo ayuu ka maqnaa oo uusan dib ugu laaban xaruntii loogu sameynayay Laptop-ka.
Dukaanka oo ah mid gibin ah, waxaa iska-leh nin ah Scottish-Americanoo magaciisu yahay John Paul Mac Isaac, kaas oo ku noolaa degmada Wilmington ee dowlad-goboleedka Delaware. Markii muddo laga maqnaa oo qof dib usoo doonta laptop-kii uu waayay, John Paul wuxuu bilaabay in uu furto oo uu sahmiyo xogtii ku jirtay Laptop-ka. Goortii uu la fajacay xogta halkaas fadhida, wuxuu la xiriirey wariye oo uu arinkii u bandhigey. Laptop-kii waxaa laga heley qoraallo gaarsiisan ilaa 450 gigabytes oo xog ah. Ogaallada xogta waxaa ka mid ah 80,000 oo sawiro iyo muuqaallo video ah. Waxaa kale oo laga heley saddexda e-mail ee u gaarka ah aabihiis, lambarrada taleefanadiisa oo la filyo in uu isticmaaley iyo magacyada ragga uga wakiilka ah arimaha sirta ah.
Waxaa kale oo laga heley lambarro taleefan oo ay leeyihiin 1,500 oo qof, kuwaas oo ay kamid yihiin siyaasiyiinta ugu waawayn dalka. Waxaa ku jira dadkaas madax-waynihii hore Bill Clinton iyo xaaskiisa Hillary Clinton, musharaxii hore ee madax-waynenimada John Kerry. Waxaa kale oo ku jira ku dhawaad ​​dhammaan xubnihii dowladdii hore ee Barack Obama.
In-kasta oo Hunter uu inkirey in laptop-ka uu ahaa kiisii, misana arintu waa ku caddahay. Si buuxda looma soo bandhigey xogaha uu xambaarsan yahay laptop-kan, laakiin inta yar oo ay wargeesyadu heleen ayaa waxay tahay fadeexad inteeda le’eg. Dhowr toddobaad dabadeed markii ay xogtii dibadda u soo baxdey, John Paul Mac Isaac waa uu xirey dukaankii, isla-markaas wuxuu ka guurey gobolkii oo dhan. Taasina waxay ka danbeysey markii uu la kulmey farriimo badan lagu handadayo dil. Khabiir aqoonta IT-ga wuxuu ku tilmaamay in arintan tahay qarow ku dhacay amniga qaranka (national security nightmare).
Waxaa Diyaariyey: Dr. Saadiq Enow
Previous articleKHALAD laga dhadhansanayo khudbooyinka ragga u sharraxan Guddoonka labada aqal ee Baarlamanka
Next articleHALIS! ”Dagaalka 3-aad ayaa bilaabmaya markan!” – Ruushka oo ka digey hub nukliyeer ah oo uu Maraykanku geeyey hawada sare